umugqa omncane wokukhiqiza okuphakelayo okwenza izinkukhu zondle ngokukhiqiza okuncane
1.Umklamo womshini kaVictor pellet bese uwafakela izitshalo zokukhiqiza izinkukhu ezisebenza kahle kakhulu zezidingo nezidingo zamakhasimende.
2.Lesi simila sokukhiqiza izinkukhu ezincane ezingama-400-600kg / h sisebenza emapulazini amancane ezinkukhu ahlukahlukene, ifektri yokondla noma ukusetshenziswa kwasekhaya ukulungiselela ama-pellets okuphakelayo hhayi kuphela enkukhu njengenkukhu, idada, goose, izigwaca ,kepha nezinkomo kufaka nezinkomo, inkomo, unogwaja, ingulube, njll.
Isingeniso se-Pellet Line Pellet Line
Ukuze unikeze izidingo nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene, siziklama futhi sizifakela izitshalo ezisebenza kahle kakhulu zezinkukhu zokukhiqiza izinkukhu. Lesi simila sokukhiqiza izinkukhu ezincane ezingama-400-600kg / h sisebenza emapulazini amancane ezinkukhu ahlukahlukene, ifektri yokondla noma ukusetshenziswa kwasekhaya ukulungiselela ama-pellets okuphakelayo hhayi kuphela enkukhu njengenkukhu, idada, goose, izigwaca ,kepha nezinkomo kufaka nezinkomo, inkomo, unogwaja, ingulube, njll. Isitshalo senziwa ngokuhambisana ngokuphelele namazinga aphesheya, esebenza kahle futhi esebenza kahle.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womugqa omncane wokukhiqiza wokuphakelayo
(Okwezinto zokusanhlamvu nezinhlayiya)
Igama Lomshini Inani
Ungachoboza okusanhlamvu kochungechunge ,njengembila,ukolweni,irayisi ,ubhontshisi,
amandla okuchoboza 1t ngehora,
Okwezinto ezixubile phatha
Umshini weFlat die Pellet Machine
angenza ama-feed pellet enkukhu, imvu,
izingulube, izinkomo nezinye izilwane
Umshini opholile ungapholisa i-pellet cindezela
Umthamo ungaba ngu-500 ~ 600kg / h,700~ 800kg / h,1000~ 1500kg / h
Ukusebenza: Isitshalo esikhulu sokugaya ukudla / ifektri yokudla / indawo yokulima; Okufanelekile umugqa wokukhiqiza wokugaya ukukhiqizwa okuphezulu nokukhiqizwa kwefolishi okuphezulu.
Isici Esikhulu: Isakhiwo esihlanganisiwe / Umsebenzi wezandla ofanelekayo / Ukufakwa okulula / Ukusebenza okulula / Izindleko eziphansi zokulungisa / Ukutshala imali ephansi. Okuphakelayo umugqa we-pellet okungakhiqiza 3000-10000 Izinto ze-T powder noma ama-pellets okondla ngonyaka. Inqubo ephelele yokufaka izinto ngamapulangwe ifaka ukutholakala kwezinto ezingavuthiwe, Ukuchoboza, ukuhlangana, yomisa, faka ukupakisha nokupakisha. Ngesikhathi sokugaya, ukondliwa kwama-pellets okuphakelayo ngeke kulahlekelwe.
(okotshani nezinto zokusanhlamvu)
Umshini wokudla we-Crusher
Crush anhlobonhlobo izinto,
njenge-alfalfa ,utshani belayisi,soya, ukolweni, ukolweni,
Umshini wokuxuba owondlayo
Okwezinto zokuxuba okuxutshiwe
Umshini opholile ungapholisa i-pellet ecindezelwe
Izinkukhu / Inqubo Yokuphamba Kwezilwane Okuphakelayo Kwezilwane
Okokuqala, izinto zokupheka ezingafuneki noma izithako zokuphaka njengokudla kwesoya kanye nommbila kuzodlula ngomshini wokuchoboza bese kufafazwa ku-powder omuhle. Ngemuva kwalokho, ezintweni zokuxuba, impuphu ingahlanganiswa nezinye izinto ezifana nevithamini, i-microelement, isidlo, ithambo, ukolweni bran njll. Ngemuva kokuxuba, bayoba yi-feed mesh ephelele. Ngemuva kwalokho, i-feed mesh izothunyelwa kumshini we-pellet wokudla kwezilwane bese idluliselwa emapenzeni ahlanganisiwe anobubanzi obufunayo. Ngemuva kokuhlola nokupholisa, ama-pellets ama-feed wezinkukhu angagcwala ngqo.
Ishadi lokugeleza lomugqa omncane wokukhiqiza wokuphakelayo
Njengoba kukhonjisiwe kuMfanekiso 1, ummbila nesoya ubhontshisi ukudla (isitolo & ngqo ukondla emhlabathini) ifakwe kuMshini Wokugaya 101 futhi wachotshozwa waba yimpuphu ecolekileyo. Noma iyiphi enye impahla kafulawa / ethambile, njengekolweni kakolweni, ukudla kwamathambo, i-microelement, uvithamini, njll, okungadingi ukuthi kuchotshozwe, bangadla ngqo kuMshini Wokuxuba Oqondile 201 kusuka echwebeni layo lokudla. Zonke izinto zixutshwe ngokufana futhi zikhishelwa ku-hopper yeSrew Conveyor 301 bese udla kwiSilo Sesikhashana Sokugcina 302 ngu-screw conveyor. Ngu-Screw feeder 303, izinto ezixutshiwe zondla ngokufana futhi ngokuqhubekayo emshinini wokuphakelwa kwezilwane we-pellet 304 bese ikhiqizwa kuma-pellets okuphakelayo. Ama-pellets akhishelwa ku-hopper yeBelt Conveyor 401 bese ufaka Umshini Wokupholisa wePellet 403 nge-Air Lock 402. Ngenqubo yokupholisa, okusha & pellets ezishisayo selehlile, izinga lokushisa le-pellet alikho ngaphezulu kuka-5 ℃ kunokushisa kwegumbi. Ama-pellets wokupholisa isilwane asepholile ahlolwe yi-Screen Vibrating 404, bese zingafakwa.